Thola amasiko amahle e-Ireland | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Cultura, General, Ireland
I-Ireland, eyaziwa njengeRiphabhlikhi yase-Ireland ivelele isiko nesiko elimakiwe. Inhlokodolobha yayo iseDublin, kepha kunamanye amadolobha abalulekile njengeCork, Limerick noma iGalway. Kulokhu sizokhuluma ngamasiko ase-Ireland, ngoba kuyizwe eliheha abanye babo, njengoSuku lweSt.
Uma sikhuluma ngakho I-Ireland sikhuluma ngesiqhingi esiziqhenyayo ngamasiko namasiko aso. Yize emakhulwini eminyaka adlule yonke yayihlangene ne-United Kingdom, okwamanje ingxenye yasenyakatho kuphela eyayo, nayo eholele ezimpini eziningi. Kepha ngale komlando wayo kunezinto eziningi eziveza lo mhlaba.
1 Usuku lukaSanta Patrick
3 Imishado yendabuko e-Ireland
4 Ukujikijela, umdlalo wase-Ireland
5 Umculo nomdanso wase-Ireland
7 Ama-Pubs kanye neGuinness
Awukwazi ukukhuluma nge-Ireland ngaphandle kokukhuluma ngoSuku lukaSt. Patrick, olugujwa cishe emhlabeni wonke namuhla. Lolu suku lunomsuka walo ku- Iholide lobuKristu futhi ihlose ukuhlonipha uSanta Patrick, usanta ongumvikeli wase-Ireland. Ibungazwa ngoMashi 17 futhi konke kuhlotshiswe ngohlaza olujwayelekile oluqinile oluhlotshaniswa nalolu suku. Kuliholidi likazwelonke eRepublic of Ireland, ngakho-ke wusuku oluhle ukujabulela imikhosi uma sisesiqhingini. Enye yemibhikisho edume kakhulu yenzeka enhlokodolobha, iDublin, futhi imikhosi ivame ukuhlala izinsuku ezimbalwa. Yonke indawo sizobona i-shamrock efanekisela izimfundiso zikaZiqu-zintathu oNgcwele uSanta Patrick aletha e-Ireland nokuthi namuhla kuxhunyaniswe nesithombe se-Ireland.
Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka ukubona abantu begqoke izingubo eziluhlaza njengama-leprechauns edilini likaSanta Patrick, ngoba konke kuxhunyaniswe namasiko ase-Ireland. Lezi Ama-leprechauns angama-leprechauns asezinganekwaneni zase-Ireland nokuthi bahlala njalo begqoke isudi ejwayelekile eluhlaza futhi benesigqoko sesici. Lezi zinhlamvu ziyingxenye yezinganekwane ezithile ezidumile ezijabulise izizukulwane futhi kuthiwa zifihla igolide, yingakho kwesinye isikhathi zikhonjiswa ngebhodwe legolide.
Imishado yendabuko e-Ireland
Kuleli lizwe futhi kunamasiko azungeze umkhosi womshado. Umshado wase-Ireland unezinyathelo ezithile ezijwayelekile futhi ezikude kakhulu nemishado esiyijwayele. Ukubopha ifindo kuyisiko elihle kakhulu lapho lezi zithandani zihlanganisa izandla zazo ngenkathi zisho amagama ezifunga ukuthi zihlangene. Ngasikhathi sinye, noma ngubani ohola umkhosi ubopha izandla zakhe ngebhebhoni enemibala ezokhombisa leyo nyunyana. Kwakukhona nesiko lokugqoka isicathulo sehhashi esasinenhlanhla kodwa lokho namuhla kwesinye isikhathi kuguqulwa kube wuphawu lwehhashi olufakwa ngumakoti. Futhi kuthiwa ngosuku lomshado kuzophekwa ihansi endlini yomakoti nokuthi umakoti nomkhwenyana kufanele badle usawoti kanye ne-oatmeal ekuqaleni kwedili ukuze babe nenhlanhla.
Ukujikijela, umdlalo wase-Ireland
Este umdlalo ungowokudabuka kumaCelt Futhi kungazwakala kujwayelekile kithi ezweni lethu, kepha lapho kubaluleke kakhulu. Idlalwa ngebhola kanye nenduku noma induku efana neHockey kodwa ebanzi. Ungagijima uphethe ibhola phansi, usekelwa yinduku noma esandleni sakho, kepha kulokhu okulandelayo ungathatha izinyathelo ezintathu kuphela ngalo. Omunye wemidlalo e-Ireland enabalandeli abaningi ngokwengeziwe yibhola leGaelic, uhlobo lomdlalo phakathi kwebhola esilaziyo nombhoxo.
Umculo nomdanso wase-Ireland
Ayikwazi ukuya ku- I-Ireland ngaphandle kokujabulela umculo wayo ojwayelekile nemidanso. Lo mculo wesintu waziwa ezindaweni eziningi njengomculo wesitayela seCeltic. Kunemisindo eminingi nemiculo ebilondolozwe phakathi namakhulu eminyaka. E-Ireland kufanele futhi sibheke nombukiso othile wokudansa wase-Ireland ngemidanso yesiko.
IBloomsday ayilona lawo masiko ahlobene namaCelt futhi abuyela emuva emakhulwini eminyaka adlule kepha ikhona futhi iya ngokuya ibaluleka kakhulu. I- UJuni 16 kulapho kugujwa khona leli holide, kusukela ngo-1954, lapho kukhishwa khona udumo kumlingisi wenoveli u-Ulysses kaJames Joyce. Elinye lamasiko wukudla ngokufana ne-protagonist ngalolo suku. Kepha ubuye wagxila ekulandeleni ezinyathelweni zikaDublin. Kunokuhlangana okuningana edolobheni labantu nabo abagqokele lo mcimbi.
Ama-Pubs kanye neGuinness
Kukhona enye into engaba ephelele isiko ngendlela yokuphila yase-Ireland. Uma uvakashela eDublin awukwazi ukuphuthelwa yi-Temple Bar, lapho ungathokozela khona izinkantini ezijwayelekile zase-Ireland, izindawo zokujabulela umculo, izingxoxo kanye neGuinness enhle, ubhiya obuhle kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amasiko ase-Ireland
Idili lamaPatios aseCórdoba